Buufatni Baabura Sa’uudii kan Magaalaa Jiddaa keessatti argamu gubataa jiraatuu gabaafame
on 09/30/2019 at 01:58 pm
Jabaadhaa rabbi isin haa gargaaruu
on 10/27/2019 at 12:14 am
rabbi isin waliin haajiraatu.
Shamshadin umar niwalale Esarahi dabarsitan nural huda duran
on 03/16/2020 at 12:19 am
Ejensiin ittisa balaa biyyattii fuula Twitter isaa irratti ibsa baaseen, balaa ibiddaa buufata baaburaa keessatti muudate kana to’achuudhaaf carraaqqiin cimaan kan godhamaa jiru tahuu ibse. Ejensiichi dabalataanis hanga ammaatti balaa kanaan lubbuun namaa kan hin dabrin tahuu beeksise.
Haaluma wal fakkaatuun Viidiyoon dhabbata Televiizhiina mootummaa Sa’uudii, Al-Arabiyaa jedhamu irraa argame akka mul’isutti, helikoptaroonni heddu buufata baaburaa ibiddaan boba’aa jiru irra maruun dhaamsuuf kan yaalaa jiran tahuu agarsiisa.
Odeeyfannoo birootiin ammoo, Waardiyyaan Malik Salmaan kaleessa magaalaa Riyaad keessatti kan ajjeeffame tahuu ibsame. Mootummaan Sa’uudii ibsa baaseen akka jedhetti, Jeneraal Abdul’aziiz Al-Fagham wal dhabbii dhuunfaa hiriyyaa isaa waliin uumameen, rasaasaan rukutamee du’e jechuun beeksise.